UMsunguli oMbi waseGal uSophia Amoruso Uthetha ngokuBhengezwa kweNkampani - Ezintsha
Eyona Ezintsha Incoko noSophia Amoruso, uMsunguli we-'Girlboss 'kaNasty Gal
Incoko noSophia Amoruso, uMsunguli we-'Girlboss 'kaNasty Gal
USophia Amoruso ufuna ukunceda abafazi baphumelele.I-Rich Fury / i-Getty Izithombe ze-Girlboss
USophia Amoruso waba ngusomashishini ngengozi.
Kubantu abaninzi, uyaziwa njengomsunguli weNasty Gal, uphawu lwefashoni lweediliya ezazingumsindo malunga no-2010. Njengebali lakudala laseSilicon Valley lokuqalisa ishishini kwigaraji, u-Amoruso waqala uNasty Gal kwigumbi lakhe lokulala eneminyaka I-22.
Ukuthetha ngokuchanekileyo, waqala kwi-eBay. Ngo-2006, u-Amoruso waseka ivenkile ye-eBay ebizwa ngokuba yiNasty Gal Vintage, ethengisa iimpahla ezindala awayezifumana kwiivenkile ezithengisa izinto zasekuhlaleni kunye nokuthengiswa kwezindlu, ngelixa wayesebenza njengommkeli kwisikolo sobugcisa eSan Francisco.
Inkuthazo yakhe yokuqala yayikukufumana nje imali eyongezelelweyo yokuhlawula amatyala (wayeyekile ekholejini kwaye engakwazi ukugcina umsebenzi ozinzileyo), kodwa ivenkile yakhe encinci ye-eBay ngokumangalisayo yaba yimpumelelo yasendle. Uhlobo olwahlukileyo lukaNasty Gal olwahlukileyo, olukhawulezayo lwafumana isiseko esinyanisekileyo kwi-intanethi. Kungekudala, u-Amoruso wayisusa kwi-eBay, wamisa iwebhusayithi kwaye wenza uNasty Gal ukuba abe luphawu oluzimeleyo.
Phakathi kuka-2009 ukuya ku-2012, uNasty Gal wayekwinqanawa yerokethi. Ukuthengisa kwakusanda ngokuphindaphindwe minyaka le; oongxowankulu bezorhwebo baqala ukuqaphela uphawu olufana nehlelo; Forbes wabeka u-Amoruso kwiphepha elingaphandle lemagazini yakhe, bemncoma njengefashoni entsha.
Kwincopho yayo, uNasty Gal wayenabasebenzi abangama-200 nangaphezulu kwe- $ 100 yezigidi kwintengiso yonyaka. Ngaxa lithile, ubutyebi buka-Amoruso, ubukhulu becala obunini eNasty Gal, yayiqikelelwa kwi-280 yezigidi zeedola ngo Forbes.
Ke ngequbuliso uzuko lwayeka. Kwiminyaka ekhokelela ku-2016, u-Amoruso wayiphatha gwenxa uNasty Gal ukuba angabinamali. Inkampani yafaka ukhuseleko kwisahluko se-11 ngo-Novemba ngo-2016 kwaye ekugqibeleni yathengiswa kumthengisi wase-Bhritane kwi-Intanethi uBoohoo.com nge-20 yezigidi zeedola.
Kodwa u-Amoruso akazange anyamalale. Ngexesha uNasty Gal etshintsha izandla, wayesele efumene isihloko esitsha njenge INew York Times Umbhali othengisa kakhulu nge-2014 ngobomi bakhe, # Intombazana . Ngo-2017, le ncwadi yahlengahlengiswa kuthotho lweNetflix elinegama elifanayo, kwaye uAmoruso wakhonza njengomnye wabavelisi abaphezulu. Isiqendu ngasinye siqala ngesibhengezo esifundwayo, Oku kulandelayo kukuphinda ubalise ngeziganeko eziyinyani… Ukhululeke ngokwenyani.
Umboniso weTV ubukhona kuphela ixesha elinye, kodwa u-Amoruso wayephethe uphawu lweGirlboss kwishishini lakhe lesibini. NgoDisemba 2017, waseka i-Girlboss Media, inkampani enomxholo ejolise ekuboneleleni ngokuxhotyiswa kwabasetyhini ngeeblogi, iinkomfa kunye neepodcast.
Kwangoko kulenyanga, uMqwalaseli wahlala phantsi no-Amoroso eSan Francisco wancokola ngohambo lwakhe njengosomashishini, ukunyuka okumangalisayo nokuwa kukaNasty Gal kunye noko ukuza kuthi ga ngoku.
Yinyani kangakanani uthotho lweNetflix? Ngaba ukubaliswa ngokuchanekileyo kwebali lakho?
I-arc ngokubanzi yebali iyinyani. Yiloo nto kanye eyenzekayo. Ndisebenza kwigumbi lokuphembelela lesikolo sobugcisa ukuqala kwam ivenkile ye-eBay. Kwaye ndenza phantse yonke into ngokwam ekuqaleni.
Kodwa bonke abalinganiswa abaxhasayo kumdlalo-umzekelo, abazali bam, into abayenzayo ukuze baphile, indlela esikufutshane ngayo [okanye ababengekho] zonke ziyintsomi. Kananjalo izinto ezininzi ezincinci ezenzekileyo zaziyintsomi. Umzekelo, andizange ndiye eCoachella (ehleka). Khange ndibaleke ndinqumle ibhulorho yeGolden Gate ndiphethe ilokhwe. Kodwa ndiye kude nendlela yam yokufumanela umntu ilokhwe enamabala okanye elahlekileyo iqhosha okanye izinto ezenzekayo phakathi kwexesha lokubeka into oyithengisayo kunye nexesha ekufuneka ulibonisile emntwini.
Malunga no-2010, uNasty Gal wayeyinkwenkwezi kwintengiso yefashoni kwi-Intanethi kunye nenkcubeko enkulu enjalo. Kodwa kwiminyaka nje embalwa, yaphela. Kweneke ntoni?
Njengoko benditshilo, ndenze phantse yonke into ngokwam ekuqaleni. Kwaye ndiqeshe umqeshwa wam wokuqala kwi-Craigslist. Phambi kokuba kungene imali [ngo-2012], ndandine 100 pesenti yeshishini, kwaye sasinenzuzo. Sasiqhume: sisuka kwi- $ 1.1 yezigidi [kwiintengiso zonyaka] saya kwi-6.5 yezigidi zeedola saya kwi-28 yezigidi zeedola [ngo-2011] kwiminyaka emithathu kungekho ntengiso yedijithali kwaye kungekho batyalomali bangaphandle.
Kodwa emva koko i-Index Ventures ingene ne-40 yezigidi zeedola kwingxowa-mali yabo yokukhula. Ngotyalo-mali, babeka ulindelo lokukhula kwentengiso yonyaka ukusuka kwi- $ 28 yezigidi ukuya kwi- $ 128 yezigidi ngonyaka omnye.Ke, umsebenzi wam yayikukuba ngandlela thile ndikhule ngenjongo xa yayiyinto yohlobo, uphawu olunje ngenkolo.
Loo mali kunye nolindelo luyothuse ngokwenene le nkqubo. Saqesha abantu abayi-100 phantse kwangoko kwaye senza isicwangciso sokukhula ngaphandle kokuba sinedatha eninzi yokuyibuyisela. UNasty Gal wayeselishishini elincinci kakhulu, ngoko ke asikhange sibambe into esiza kuyidinga ukuyila ngokufanelekileyo isicwangciso sokukhula.
Ke, ndicinga ukuba olo yayiluhlobo lwezinto eziseta izinto zihamba. Izinto zaba nzima kakhulu ngokukhawuleza okukhulu.
Xa ufumanise ukuba uNasty Gal uyehla, ubucinga ntoni? Ngaba uzibeka ityala?
Ndicinga ukuba i-Index Ventures ihambisa i-40 yezigidi zeedola kumntu ongenalwazi ngokungazi ukwakha i-deck-ndingazi nokuba ndingawakha njani na umboniso-wayenokungakhathali endaweni yam. I-Nasty Gal yayilungile ngaphambi kokuba kungene imali.Ifoto nguFrazer Harrison / Getty
Lilonke, ucinga ukuba uNasty Gal uphumelele kwikhondo lakho lomsebenzi?
Ndiyathetha, inkampani ithengise i-20 yezigidi zeedola. Ke, kwisikimu esikhulu sezinto ezinokwenzeka kwi-30s yakho yokuqala, ewe ndiyazingca ngayo.
Kwakuyindlela yokukhwela, kwaye ndandingenangqondo. Ndandifunde yonke into kwaye ndandisemncinci kakhulu. Kodwa oko akuthethi ukuba ndiyazi yonke into okanye ukuba yonke into ndiyifumene-kunzima ngoku njengokuba kwakunjalo xa ndandisakha inkampani yam yokuqala.
Ke, la mava awuchaphazele njani umsebenzi wakho njenge-CEO ngeli xesha?
Ndicinga ukuba eli shishini apho liqhelekile ukusilela, vuka uzame kwakhona, kwaye uphinde le nkqubo.
Ngokungafaniyo noosomashishini abaninzi eSilicon Valley, ndenze ii-brand ezimbini [uNasty Gal noGirlboss] ngokuzithoba, hayi ngokuyila.Ndiva ngathi ndisafunda ngendlela engeyiyo eyendalo yokwenza izicwangciso, ukwenza kunye nokulungiselela izinto njenge-CEO. Kwakukho izinto ezininzi endandingaziqondi ngokupheleleyo kwiminyaka eli-10 eyadlulayo nakwiminyaka emihlanu edlulileyo.
Into entle ngoku kukuba sisengumbutho omncinci. Ke, xa kukho amaqhuma endleleni, ndinokulungisa ngokukhawuleza. Kwaye ndinokuphumeza kwasekuqaleni izinto endaziyo ukuba zifuna ukwenzeka.
Kutheni le nto ukhethe ukuqala inkampani yeendaba emva kokuqhuba ubukhosi bevenkile?
Ndiye ndachola [imidiya] ngokukhawuleza emva kokuba ndimkile kuNasty Gal. Incwadi, ngohlobo lwayo, yayiliqhekeza leendaba; ipodcast yam, iRadioboss Radio, eza emva koko, yayisiqwengana nemithombo yeendaba; Kwaye ke uthotho lweNetflix.Ke, kwakulindelekile ukuba ndiqhubeke nencoko kwaye ndenze umxholo ongaphezulu kubaphulaphuli bethu esele bezibandakanya kakhulu. Ngexesha endandiqala ngalo i-Girlboss, yayisele iluhlobo olomeleleyo.
Ngaba le yinto okhe wafuna ukuyenza? Ndiyathetha, xa uqala i-Nasty Gal, awuzange ube nokhetho oluninzi. Ubuthengisa izinto kwi-eBay ukuze uhlawule amatyala. Kodwa eli xesha lahluke kakhulu: unemali ngokuthengisa i-Nasty Gal kwaye udumile.
Ngokuqinisekileyo. Eli lixesha lokuqala kwikhondo lam ukuba injongo yam kunye nethuba lam lihambelane, elixhobisa abantu basetyhini.
I-Nasty Gal yayimalunga nokwenza abantu basetyhini bazive benentembelo ngefashoni okanye ngesimbo, kwaye i-Girlboss imalunga nokunxibelelana nabanye, ukubonelela ngezixhobo, izixhobo kunye nemfundo ukuze baqhubele phambili. Kum, uziva ngathi inyathelo elilandelayo lendalo, ngakumbi kuba ndinqwenela ukuba nale nto xa bendisakha inkampani yam yokuqala. Isimemo sikaSophia Amoruso sika-2014, '#Girlboss,' sahlengahlengiswa kuthotho lweNetflix enegama elifanayo kwi2017.Cindy Ord / Getty Izithombe zikaSophia Amoruso
Ngaba ukubhujiswa kukaNasty Gal kungumqobo kwingxowa-mali yakho yokwenza i-Girlboss?
Hayi ndicinga ukuba ukuqokelela imali kunzima ngaphandle kwento oyenzileyo ngaphambili.
Eli lixesha lokuqala ndiqokelela imali. E-Nasty Gal, abantu baphose nje imali kum. Ke lixesha lam lokuqala ukuya kuphuma kwikhondo lomsebenzi wam. Sisakhono esifundwayo, kwaye sazisa imibuzo emininzi kumphezulu, evakala iyinto esempilweni kakhulu kwishishini.
Ukuba kukho nantoni na, ndingusomashishini onamava ngoku, kwaye amaxesha amaninzi kukwishishini lesibini ukuba usomashishini ulunge ngenene.
Ke, yeyiphi eyona inzima- ukunyusa ingxowa mali yesiqalo sokuqala okanye ukulawula iqela elikhulu njengoNasty Gal?
Ndiyathetha, bahluke kakhulu. Kodwa ndingatsho ngokuqinisekileyo ukuba akukho nto inzima kunokuba ukulawula iqela elikhulu, ngaphandle kwezinto mhlawumbi ezinzima ezenzeka kubomi bakho. Abantu balikhadi lasendle; zezona zinto zingalindelwanga kwishishini. Ndicinga ukuba kunzima kakhulu ukuphatha abantu kunokugqibezela i-pitch yakho yotyalomali okanye ukufumana imveliso yentengiso efanelekileyo, kuba zonke ziyalawuleka.
Ngaba abantu basakubuza malunga neNal Gal naphina apho uya khona… njengokuba ndenzile nje?
Ewe. Ngokwenyani, andicingi ukuba abantu bangaze bayeke ukubuza malunga neNasty Gal. Kodwa kulungile. I-Nasty Gal yinxalenye ebaluleke ngokwenene yento eyenza i-Girlboss kunye nento endiza kuyinikela, kuba, uyazi, ndidlule kwizinto ezininzi kwaye ndifuna ukusebenzisa la mava ukwabelana nawo wonke umntu wasetyhini osilelayo, okanye nantoni na ofuna ukuyenza. yibize, lithuba nje lokwenza ngcono kunye nokufunda.
Kulula kakhulu ukuchitha ixesha elininzi ujonge ngasemva. Kwaye, ukuba awuzenzi iimpazamo, awuthathi mngcipheko. Ndingathanda kakhulu ukwenza iimpazamo kwaye ndifunde kunokuhlala esitulweni sam ndibeke iipeni.
Uyibona phi i-Girlboss ekuhambeni kwexesha, mhlawumbi emva kokuba abantu bengasathethi nge-Nasty Gal?
IGirlboss imalunga nokumamela kwayeukuva ukuba zeziphi izizathu zabantu. Ndicinga tEyona nto sinokuthi siyenze eneneni ayicacanga ncam njengomququzeleli kwaye ivumela uluntu ukuba luzakhele, njengecawe. Ndicinga ukuba abafazi baya kuhlala befuna ukudibana kunye nesidingo sento efana ne-Girlboss.Ekugqibeleni, ndifuna ukwakha uphawu lwehlabathi oluchongwa ngabantu kwaye oluhlanganisa abantu ngokuzimeleyo.
Owayesakuba nguMongameli we-Lehman uJoseph Gregory ubeka i-32.5 yezigidi zeerandi kwi-Bridgehampton Mansion Up for Rent
Amafutha eAmtrak, abizayo kwaye acothayo eNortheast New Corridor Locomotives Afika kuvavanyo
IParler yatyhobozwa kwiWordPress, Iplatifomu enkulu ye-Intanethi. Ngaba Wonke umntu Usengozini?
Charting the Rise of Nerd Culture Into the Age of Netflix Nge 'Den of Geek' uMhleli uMike Cecchini
U-elizabeth holmes uya ejele
amagqirha ixesha le-2 isiqendu 5 ukuphindaphinda
Iindawo zokuthandana kwabantu besini esinye ezikufutshane nam
Thetha kwi-intanethi ekhululekileyo kwi-intanethi
I-comic con 2018 san diego